၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရ၍ သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေ | News Reporter
၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရ၍ သက္ကမိုးညိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေ
Wisdom Hill ကျောင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုမှ ကျူးလွန်ခံရသူ အသက် ၂ နှစ် ၁၁ လအရွယ် မူကြိုကျောင်းသူ ကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယား အမှုအား အစဉ်တစိုက် ရေးသားဖော်ပြပေးနေသည့် အကောင့်ပိုင်ရှင် သက္ကမိုးညို ကိုဝင်းကိုကိုသိန်းကို Wisdom Hill ကျောင်းမှ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် အမှုဖွင့်လိုက်၍ နေပြည်တော် အမှတ် ၁ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက ယနေ့နံနက်တွင် ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေသည်ဟု ကနဦး သတင်းရရှိထားသည်။
ဗစ်တိုးရီးယားလေးအမှုမှာ တစ်လကျော်ကြာမြင့်နေသည့်တိုင်အောင် တရားခံမပေါ်သေးပဲ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒရိုင်ဘာအောင်ကြီးအားတရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC ဆီရောက်ရှိလာသော CCTV မှတ်တမ်းအရ တရားခံအောင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေတယ်လို့လည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာများတွင်ဝိုင်းဝန်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး ၆၆ ဃ ဖြင့်တရားစွဲဆိုခံထားရသော သက္ကမိုးညိုနှင့်ပတ်သတ်ပြီးသတင်းများထပ်မံရရှိပါက ဖော်ပြပေးပါသွားပါမည်.
Credit – celefamily
Wisdom Hill ကြောငျးတှငျဖွဈပှားခဲ့သော သကျငယျမုဒိမျးမှုမှ ကြူးလှနျခံရသူ အသကျ ၂ နှဈ ၁၁ လအရှယျ မူကွိုကြောငျးသူ ကလေးငယျ ဗဈတိုးရီးယား အမှုအား အစဉျတစိုကျ ရေးသားဖျောပွပေးနသေညျ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျ သက်ကမိုးညို ကိုဝငျးကိုကိုသိနျးကို Wisdom Hill ကြောငျးမှ ဆကျသှယျရေးဥပဒပေုဒျမ ၆၆ (ဃ) ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့လိုကျ၍ နပွေညျတျော အမှတျ ၁ ရဲတပျဖှဲ့စခနျးက ယနနေံ့နကျတှငျ ချေါယူစဈဆေးနသေညျဟု ကနဦး သတငျးရရှိထားသညျ။
ဗဈတိုးရီးယားလေးအမှုမှာ တဈလကြျောကွာမွငျ့နသေညျ့တိုငျအောငျ တရားခံမပျေါသေးပဲ ရဲတပျဖှဲ့မှ ဒရိုငျဘာအောငျကွီးအားတရားခံအဖွဈစှပျစှဲကာတရားစှဲဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။ BBC ဆီရောကျရှိလာသော CCTV မှတျတမျးအရ တရားခံအောငျကွီးမဖွဈနိုငျဖို့ရာခိုငျနှုနျးမြားနတေယျလို့လညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမြားတှငျဝိုငျးဝနျးရေးသားနကွေတာဖွဈပါတယျ။ဆကျလကျပွီး ၆၆ ဃ ဖွငျ့တရားစှဲဆိုခံထားရသော သက်ကမိုးညိုနှငျ့ပတျသတျပွီးသတငျးမြားထပျမံရရှိပါက ဖျောပွပေးပါသှားပါမညျ.
Previous articleWisdom Hill ကျောင်းမှ သက္ကမိုးညိုကို ၆၆(ဃ)ဖြင့်အမှုဖွင့်ထားသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေး
Next articleBBC က သီးသန့်​ ရရှိထားတဲ့ ဒရိုင်​ဘာ ကို​အောင်​ကြီးရဲ့ လှုပ်​ရှားမှု CCTV ဗီဒီယိုဖိုင်